Yekupedzisira Rondedzero Ye 'Slice Ye Hupenyu' Anime Iwe Unonakidzwa Kuona - Zvimwe
Iyo Yekupedzisira Rondedzero Ye 'Slice Ye Hupenyu' Anime Unofanirwa Kuti Ufunge
Hapana chinhu chakafanana ne 'slice yehupenyu' anime. Mushure mezvose, ndizvo chaizvo zvauri kuwana.
Chidimbu chemavara chinorarama zuva nezuva.
Kurwisana kwavo kuri kuramba kuripo, matambudziko, uye nguva dzekufara.
Uye kutarisisa kwakasimba pahupenyu hwevatambi.
Kana sekutsanangura kunoita Google.
'Chiratidzo chaicho chezviitiko zvezuva nezuva mufirimu, mutambo, kana bhuku.'
Heino runyorwa rwezvimwe ZVAKANAKA zvinoratidza zvakakodzera kuongorora.
37+ Slice Ye Hupenyu Anime:
1. Sakura Kutsvaga
Sakura Quest inotanga na Yoshino Koharu. Musikana ari kunetsekana nekuvhima basa muTokyo, uye anopedzisira awana basa mumusha wekumaruwa netsaona.
Mamwe mashoma akajeka kubva kuSakura Kutsvaga:
Inotarisa pakufamba uye kushanya (sebhizinesi).
Iyo anime yakavakirwa mu hupenyu chaihwo Musha wechiJapan, unonzi Manoyama.
Chinangwa chechirongwa ndechekuunza 'Manoyama' kuhupenyu, uye kukwezva vashanyi kumusha wakanganikwa.
Kune akakomberedza mashanu makuru echikadzi mavara. Mumwe nemumwe ane hunhu hwavo uye hunhu.
Uye HAKUNA sevhisi fan haina kukodzera.
Kana iwe uchida kutarisa izvi nemumwe munhu kunze kwako, unogona. Feni sevhisi isingaremi.
Sakura Kutsvaga yakanaka kune chero munhu anofarira bhizinesi uye kushanya (aine mamwe majee).
Asi Toradora ndeye chero munhu anoda romance akateedzana ane 'emanzwiro' episodes.
Pakutanga ndezve Ryuuji naTaiga.
Taiga anogara achishungurudza Ryuuji isinga mire.
Asi paunenge uchipinda mune ino anime, uchifunga kuti haina kukumanikidza kuti uidonhedze, hunhu hwese hunotanga kukura zvakanyanya, uye iwe unodzidza zvakawanda nezveumwe neumwe mavara mukati-kunetsekana uye kumashure mashure.
Gare gare iyo anime inotanga kuwana zvakanyanya kusiyana nechero chimwe chidimbu chehupenyu nhevedzano iwe chauchamboona.
Nechikonzero ichocho, Toradora inyanzvi mu 'chidimbu chehupenyu' dhipatimendi. Uye iwe unofanirwa kuitarisa.
3. Musika weTamako
Yakagadzirwa neKyoto Animation, Tamako Musika chidimbu chisina mhosva chehupenyu nezvaTamako, mwanasikana wemurume bhizinesi anoita Mochi kurarama.
Kusiyana neanime senge Sakura Kutsvaga, Musika weTamako hauna chakanangana nekutarisisa. Zvimwe kunze kwekuratidzira mararamiro ezuva nezuva ekugara mutaundi diki, uchiita bhizinesi, shiri inotaura ine mafuta, chikoro uye komedhi.
Asi usanyengerwa nazvo. Ichi ndicho chimwe chezvakanyanya kuzorora anime inoratidza izvo zvinokuisa iwe nyore.
Uye iwe zvakare haufanire kufunga zvakawandisa pamusoro pezvauri kutarisa ... Nekuti izvo zvinotonhora uye zvakapusa.
Verenga: 6 Yeiyo Yakakura Anime Studios
4. Muroyi Wekubhururuka
Iko seTamako Musika kuri nezveguta rinoita Mochi, Flying Witch ndeye muroyi mukurovedza.
Makoto Kowata anotamira kumaruwa nemhuri kuti awane 'ruzivo rwega' rwuchamugadzirira ramangwana.
Kunyangwe iwe usingaone yakanyanya 'mashiripiti' mune ino anime, kana iwe uchidaro inoshandiswa kurerutsa mamiriro, kana kutsanangura chimwe chinhu iyo anime iri kuyedza kuratidza.
Usatarisira kuwedzeredza kwakawanda kubva kune ino, asi tarisira kuti unzwe kutonhora uye kuzorora kunge pasina imwe anime inokwanisa.
Inoenderana: Iyo # 1 Anime Unofanirwa Kuona Asina Kukomba 'Kamwe' Mune Hupenyu Hwako
Anime senge Toradora inosimbisa kunetseka kwemanzwiro erudo (pakupedzisira).
anime ane masimba masimba uye hupenyu hwechikoro
Asi Orange inoratidza kushushikana, kuzviuraya, kudanana, kuzvipa mhosva nekushusha. Izvo zvinozviisa parutivi kubva kune yako yepakati slice yehupenyu akateedzana.
Kunge chero munhu 'akajairika' munhu angadaro, Kakeru Naruse ane mhosva yekufa kwamai vake. Nekuti musi waakafa akataura chinhu chaaisafanira kuve nacho.
Uye kuzvidemba iri kumuparadza kubva mukati nekunze.
Iyi yakadzika, ine nhevedzano nhevedzano saka chengeta izvo mundangariro usati wafunga kutarisa. Sezvo zvisinganzwisisike nekuda kwezvikonzero zviri pachena.
6. Kokoro Unganidzo
Pakutanga ndaisaziva zvekuita Kokoro Unganidzo, asi painenge ichifambira mberi inotanga kupenya uye kutumbuka seruva reIris.
Kokoro Connect ndeye vadzidzi vashanu vanomanikidzwa kutamba pamwe ne 'kuyedza' kunoedza hukama hwavo, kusagadzikana, manzwiro uye hukama neumwe neumwe.
Izvo zvinofungidzira. Saka hazvigoneki iyi anime haadi ita kuti ufunge nezve hupenyu hwako neimwe nzira kana imwe.
Kune kumwe kudanana zvakare kana izvozvo zvichinakidza fancy yako.
Clannad inozivikanwa se 'hunyanzvi' kana zvasvika pakudanana uye chidimbu chehupenyu. Uye ndinobvuma sekuzvitarisa kwandakaita.
Mwaka wekutanga unotarisa pa Tomoya Okazaki naNagisa Furukawa.
Nagisa 'haana kusimba' panyama, uye pane chikonzero chakadzama chekuti nei. Asi mwaka wekutanga waClannad unotarisa zvakanyanya pakufara, uine yako 'isinganzwisisike' iyo nguva inechinangwa.
Mwaka 2 ndipo panoshanduka Clannad kuita chimwe chinhu chakadzika, zvinoshungurudza uye ichidurura nemutoro wepamoyo.
Saka kana iwe ukafunga nezveCannadad, ita shuwa kuti iwe unotarisa ese ari maviri mwaka kuti uwane yakazara nhoroondo uye ruzivo.
Yakagadzirwa neKyoto Mhuka, Kanon ndiyo yandinodana mukoma munin'ina waClannad.
Chaicho cheKyoto Mifananidzo, masitaera, dhizaini uye mavara anogoverana yakasimba kufanana.
Iyo yekuratidzira yakangofanana yakanaka yenguva yayo, uye iyo nyaya yakakosha zvakare. Asi Kanon yakafukidzwa nekubudirira kwaClannad.
Izvo padivi, kana iwe uchida chimwe chinhu kunze kweClannad ine imwe nyaya uye theme, Kanon ndiyo sarudzo yakanakisa.
Kune mashoma akaenzana slice yehupenyu kuna Clannad senge Kanon akakosha kutaura nezvayo.
9. Mutambo Mutsva!
Mutambo Mutsva! ndechimwe chechidimbu chinopenga chehupenyu chinoratidza muindasitiri. Yakaburitswa kumashure muna 2016.
Aoba Suzukaze ndiye protagonist, uye chiroto chake kushandira kambani yekutamba nekugadzira mitambo yekurarama.
Mwaka 1 ne2 zvinotevera Aoba Suzukaze parwendo rwake muindasitiri yemitambo. Pamwe nevamwe vatambi vese vanoshandira iyo imwechete kambani (ine zvinangwa zvakafanana).
yepamusoro yakatarwa anime nguva dzese
Saka iwe unonakirwa neizvi kana 'kutamba' kana 'programming' kuri kufarira kwega.
Hupenyu hwemhando ndeimwe yehunhu Hutsva Mutambo. Iyo inopenya, yakajeka, yakanaka uye yakanaka pameso.
Yakagadzirwa neKyoto Mifananidzo, Violet Evergarden ndeye anime iyo anoziva kutaura sei manzwiro nyaya.
Seti yega yega yezvikamu yakanangana nemutambi mukuru, Violet, ane basa rekubatsira vanhu kunyora tsamba kuvanhu vavanoda.
Kuti uvape kuvharwa.
Mashoko haagoni kutsanangura kuti yakawanda sei a chiito iyi anime iri.
Izvo zvakatombo fananidzwa nezviratidziro senge Clannad yeayo yepamoyo nyaya-kutaura.
Inoenderana: 9 Emotional Quote Kubva kuViolet Evergarden Yausingazokanganwe
Barakamon iri pamusoro peSeishu Handa , calligrapher uyo akatumirwa kunogara kuchitsuwa kuti ashande pane hunhu hwake hwakaipa.
Ese zvikamu gumi nembiri zvinotarisa kuvandudzwa kwaSeishu Handa, rwendo, uye neshanduko dzaanopinda semunhu.
Kune zvakare yakanaka nhanho yemazera pakati peakakosha uye ekutsigira mavara muBarakamon aunoda.
Miss Kobayashi's Dragon Maid Iko kunakidzwa kwakachena, uine akati wandei wenguva inodziya yekuchinja-kukwirisa nhanho mbiri dzezvikamu.
Iyo main mutsauko pakati peichi neyakajairwa chidimbu chehupenyu, chakanangidzirwa pahunhu hwemunhu, uye makava akafanana nevanhu.
Unogona kutarisira ”imwe fanervice pano kubva kuLucoa, hunhu zvakajeka zvakagadzirwa for fanervice. Asi zvakanyanyisa kuderera pane izvo zvaunotarisira kubva kune zvinoenzanisirwa zviratidzo.
Himouto Umaru Chan ndeye hanzvadzi inoshungurudza, Umaru, nemukoma wake mukuru: Taihei Doma.
Umaru ndiye maviri-kumeso, kurarama huviri-hupenyu kungoita zvinoenderana nezvinotarisirwa nevanhu.
Kungofanana naMiss Kobayashi's Dragon Maid, Umaru Chan anonakidza, uye komedi ichaita kuti useke.
Kunyanya kana iwe uri mumavhidhiyo mitambo nenzira iyo MC iri.
14. Aria Iyo Mifananidzo
Aria Iyo Nyowani ndiyo vhezheni yehupenyu yekuwana masaji. Nekuti iri kuzorora, dzimwe nguva inotapira, uye zvakare inotonhora kuti ive 'yakakomba'.
Iko hakuna kwakawanda kwenyaya mumhando iyi yeanime, asi iwe haudi nayo nekuti inosanganisa chidimbu chehupenyu nesci-fi uye fungidziro.
Uye iro guta iyo anime yakavakirwa mukati iri yakatorwa kubva kuguta reVenice, kuItari. Nedzimwe shanduko kuti riite rakasarudzika.
15. Kirasi YevaElite
Kirasi yeElite ndizvo hapana kunge chidimbu chako chezuva nezuva chehupenyu nhevedzano.
Sei? Iine rumwe rutivi rwakasviba kupfuura rwakawanda. Unowana izvi nekukurumidza mukati mezvikamu zvishoma zvekutanga.
Mushure mezvose, zano rinotarisana nevadzidzi vanomanikidzwa kwikwidza pamwe nemumwe kurarama uye kuita mari, sechikamu chechirongwa chechikoro nemitemo yakaoma.
Iyo anime mune yeligi yayo yega.
16.Rudo, Chunibyo Uye Zvimwe Zvokufungidzira
Chunibyo ndiyo mhando yechidimbu chehupenyu izvo zvinokuita kuti unetseke, uye kukumanikidza iwe Donhedza.
Kana zvirinani ndizvo zvakaitika kwandiri… kusvikira ndazomupa mumwe mukana uye ndokunakirwa zvizere.
Nyaya iripo kunyanya nezvaRika, wechidiki anotenda kuti ane masimba makuru. Uye Yuta, chirume chirume chinobatwa mukunyepedzera kwaRika.
Zvinhu zvinotanga kuwana kudanana zvishoma mumwaka wechipiri wenyaya dzino.
17. Yakanakisa Kanzuru Yevadzidzi
Iyo zano iri zvese muzita.
Zviri nezve kanzuru yepamusoro yevadzidzi uye hupenyu hwavo hwezuva nezuva hwekugadzirisa chikoro chavo. Inotarisa kunyanya pana Rino Rando uye Kanade Jinguji.
Hunhu hwese haukanganwike, kunyangwe paine mavara masere. Uye iwe unowana musanganiswa werudo, benzi komedhi, uye donhwe diki rekupisa-moyo-zvikamu kuti uzviwedzere zvese.
Ndinoda anime iyo inogona kundiita kuseka uye ita kuti ndinzwe nezve mavara.
Hinamatsuri ane hunyanzvi hwekuita zvese.
Kune rimwe ruoko une Hina, musikana ane masimba emweya (anogara naYakuza).
Uyezve une Anzu, musikana ane masimba emweya… kunze kwekunge apedzisira asisina pekugara.
Iwe unoona zvinhu zviviri izvi zvinotamba kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, iyo anime inoita basa rakanaka re 'nguva' yacho chaizvo.
Hyouka ndeye musikana anotsamwa anotsungirira: Eru Chitanda, uye mukomana ane usimbe: Houtarou Oreki.
Pamwe chete (nevamwe vatambi) vanogadzirisa zvakavanzika uye vanowana mhinduro dzemibvunzo yakaoma.
runyorwa rweakatumidzwa anime pane hulu 2017
Anenge akafanana nematikitivha.
Chinhu chinonyanya kushamisa nezveHyouka ndeche zvinonakidza sei, kunyangwe iwo dingindira richiita kunge rinofinha uye pakati.
ReLife chidimbu chinodzokororwa chehupenyu akateedzana nezve kuyaruka uye kushandura hupenyu hwako kuti huve nani.
Kaizaki Arata anoita rombo rakanaka uye anopiwa mukana wekushandura hupenyu hwake, uye kugadzirisa zvikanganiso zvaakaita semunhu mukuru mudiki muJapan.
Izvo zvinouya zvinotevera mutambo wakachena, uye nyaya ine musoro inoteera mashoma mashoma mavara mukoreji.
Dzimwe nguva, zvinowana zvishoma 'rima' futi.
Ranma inogadzirwa nevagadziri vamwe veInuyasha. Saka chikoro chekare nemitemo ya2018.
Asi kana iwe uchida chidimbu chehupenyu nhevedzano icho rakafemerwa chidimbu chehupenyu nhasi sekuziva kwedu, tanga neRanma 1/2.
Icho chimwe chezvakanyanya chepakutanga slice yehupenyu inoratidza izvo zvichiri kukosha uye zvakakosha kurumbidzwa.
22.Kino's Mafambiro (Uye Rwendo rwaKino)
Kufamba kwaKino ndiyo yekutanga (uye chete) mwaka weiyo Kino's anime akateedzana.
Yakatanga mukutanga 2000's, uye iyo animation ihwo humbowo hweizvozvo. Asi usabviswe nazvo.
Kana iri nyaya yekutaura nyaya, Rwendo rweKino ndiyo yakanyanya zvinozorodza anime ndakatarisa. Uye chikamu chekufamba kuenda kune dzakawanda nyika nemaguta ndicho chimwe chikonzero chakakosha kuti uzvione.
Rwendo rwaKino ndeye 'yekuwedzera' anime ine yemazuva ano mifananidzo uye kusvika kudhara zvinoonekwa. Asi yekutanga ndeye zvakanaka shanduro yevaviri.
Iyi anime ndeye ese marudzi eanoshamisa, anoshungurudza, uye mune dzimwe nzira, yakabuda. Izvo zvaungadaidze kuti 'rima comedy' nechidimbu chehupenyu chiri icho chikuru chinotarisisa.
Tomoko Kuroki musikana achiri kuyaruka mushure mezvose nekuzviremekedza kwakaderera, asina shamwari, uye nepfungwa yakaderera yake.
Saka mhando dzezvinhu zvaanoita kuti awane kutariswa, kucherechedzwa, uye 'kuita nhamburiko' zvinoshanduka zvoita zvinhu zvisina kujairika, zvisinganetsi izvo zvinokuseka iwe.
Kana zvisina kudaro, zvinokuita kuti urembe.
24. Hupenyu Hune Njodzi hwaSaiki K
Saiki K inzira inozorodza kutsemura hupenyu nekuti inowedzera chinhu chekufungidzira, masimba makuru, uye anopinza protagonist uyo anoona kugona kwake sekukanganisa.
Mumaziso ake, Saiki K anongoda kurarama hupenyu hwake uye kudzivirira kunetswa nechero ani.
Asi sezvauchaona neanopenga mutambo uye asingaregi maparodi, izvi zviri pachena kuti zvakawandisa kukumbira.
Ini handife ndakapupurira zvakanyatsoitika chimedu chehupenyu dzakateedzana chero ini ndichirarama.
Nana ndiye anonyanya kudanana mu 'indasitiri.' Yakagadzirwa naMadhouse.
Ndinokurudzira vese vechidiki vakuru (uye Millennials) kuti vaone. Nekuti ichavhura maziso ako kune iyo nyika yakakukomberedza, nenzira iri yechokwadi uye yakapusa kuti iwe utarisane nayo.
26. Musikana weSikidhi
Squid Musikana musikana anobva kugungwa nemasimba uye kugona kwe squid. Kunyangwe matauriro aanoita akashamisika, kushamisa, asi kupfuura zvese, hilarious.
Icho chikamu cheanimes killer charm.
Nemwaka mitatu yakazara, uye OVA, ichi chidimbu chakadzoserwa, chisina hanya cheupenyu kukuchengetedza iwe.
Squid Musikana kwandiri akashongedzerwa pasi, pamwe nekuti zvinoonekwa senge 'zvevacheche' (chero zvazvinoreva).
Nodame Cantabile anotora ako epakati erudo cliches , oipwanya asingadembi.
Tora mutambi mukuru: Chiaki Semuyenzaniso.
Mukomana uyo panzvimbo yekupa amburera kumusikana anomuda, anofamba ozvishandisa hake.
Kana iwe uchida chimwe chinhu chisingaenderane uye chinonaka, Nodame Cantabile angakushamise iwe.
28. Vanoda Live Live Idhori Project
Ida Live Live i 'vakanaka vasikana vachiita zvakanaka zvinhu' chidimbu chehupenyu akateedzana. Asi hachisi chokwadi zvachose.
chimedu chehupenyu anime pane hulu
Zano guru ndere pamusoro paHonoka Kousaka, shamwari dzake, uye chinangwa chavo chekuve zvidhori zvechikoro pamwechete.
Iyo ndeimwe yekutanga Anime 'musikana wese' anoratidza ini ndakatarisa, uye hunhu hwese hunoita kuti Rarama Urarame zvese zvinonakidza uye zvinonakidza.
Inoenderana: 13 Vanoda Live Live Idhrojekiti Mapurojekiti Anokodzera Kugoverwa
29. Nyeredzi Yerombo
Lucky Star iri mumwe ese-musikana anime akateedzana. Asi izvo hazvina basa kana iwe wakavhurika-pfungwa uye uchida imwe YAKANAKA mutambo.
Konata Izumi ndiye akarara kumashure, anotsvinya hunhu uyo ​​anovhenekera iyo showa. Uye shamwari yake - Kagami ndiye akasiyana.
Tarisira kuti uone mareferenzi emitambo, tsika dzeOtaku, HAPANA kuronga, uye zvikamu zvisina kujairika izvo zvinokuita kuti ushamisike WTF iwe yauri kutoita wega.
30. Live Live (Gakkou Gurashi)
Gakkou Gurashi, kana Chikoro Live muChirungu, inoteedzana inotyisa nezve zombies, chirwere chepfungwa, uye psychology yehunhu hwese.
Vese vatambi vanonyanya kumanikidzwa kurarama pane 'zvasara' nekuti nyika yasvika kumagumo. Sezvo iri kukambaira neZombies.
Yuki Takeya, mumwe wevatambi vakuru anotanga kurwara nepfungwa kubva kunetsekana nemamiriro ezvinhu anoshungurudza.
Kana chiri chinhu chinotonhora uye chakasviba iwe chaunoda, ichi ndicho chidimbu chehupenyu anime kupinda mukati.
Saka usarega 'akanaka' achikunyengedza.
31. Tanaka Kun Anogara Asina Musoro
Tanaka mudzidzi ane usimbe anonyanya kuchengeterwa zvake zvakanaka . In fact he is so chilled, ungafunga kuti anga achisvuta sora nekukwira pamusoro payo.
Shamwari yake Oota munhu akasimba, anofunga uye anoshanda uyo Tanaka anovimba naye.
Iko hakuna yakawanda yeano rangana, asi hapana kudiwa kuva. Nekuti ndiyo mhando yeanime iwe yaunotarisa kune vatambi, zororo, uye dzimwe nguva komedhi iri mumutambo wayo.
32. Muroyi Mudiki Academia
Mudiki Muroyi Academia ndeimwe yeanonyanya kukoshesa Studio Trigger mune yavo katarogu.
Iwe hausi kuzowana fanervice pano. Kana chero chinhu icho anoedza kukanda zvinyararire muvashandi vebasa nekuda kweiyo fanervice '.
Zano iri ndere Atsuko Kagari, uye chiroto chake chekuve muroyi chinogona kuita kuti vanhu vanyemwere.
yakanakisa anime runyorwa rwenguva dzese
Iyi kurota yakapfava inoshanduka kuita mutambo wekupenga uyo unonakidza, unodzidzisa uye unoita kuti ushuvire kuti iwe ungabatana naye.
Ndiyo mhando yeanime iwe yawaishuvira iwe kuti utarise semwana, kunze kwekunge isina kumbovapo.
Iwe hauna kufunga kuti chinyorwa ichi chingave chakakwana pasina K-On iwe?
K-On ndiye asina mambokadzi mambokadzi yechidimbu chehupenyu chinoratidza. Ndiwo mashandiro anoita Kyoto Animation seanime studio.
Iko hakuna zano, kungofanana neLucky Star, uye ndiyo chaiyo tsananguro ye 'vakanaka vasikana vanoita zvinhu zvinoyevedza'.
Uye kunyangwe zvakadaro, iyo animation inoitwa zvakanaka, komedhi ndeyechinyakare, uye senge chidimbu chehupenyu, zviri nyore kudziya nekuti zviri nyore kuenda.
Hanayamata ari pamusoro paNaru Sekiya, wechidiki anonyara anozvidya mwoyo uye kutya mumapoka makuru.
Pakupedzisira Naru nevamwe vatambi vanosangana pamwechete ndokutanga kuita zvinodaidzwa neJapan Yasakoi.
Ndeupi wakasununguka mhando yekutamba.
Hanayamata mumwe 'vasikana vakanaka vanoita zvinhu zvakanaka', kunze kwekugadzirwa uye mavara ari echokwadi. Iko seanime senge K-On yakawedzera 'kuita semwana' nekuda kweiyo 'Moe' dhizaini.
Icho chimwe chechidimbu chakatsetseka chehupenyu chinoratidza icho chine chiyero chakanaka chese chinhu chaunotarisira, pasina chinofinha kana kunyanyisa.
35.Mwenga Wekare weMagus
Wekare Magus Mwenga ndi runako chidimbu chehupenyu, chakaenzana neViolet Evergarden yehupenyu hwayo hwemhando.
Zviri pamusoro Hatori Chise , nherera ine masimba akasarudzika akarambwa uye akarambwa hupenyu hwake hwese nekuda kwe 'zvaari'.
Yekutanga wave yeiyi nhepfenyuro inotanga yakasimba, asi zvinoenderana nemaonero ako, yekupedzisira hafu inodonha zvishoma.
Asi Zvichiri kukosha kukurudzira
36. Haganai: Handina Shamwari Dzakawanda
Haganai inotora chidimbu chinowanzoitika chehupenyu hupenyu, uyezve inowedzera kudheerera, kusurukirwa, uye Ecchi kune musanganiswa.
I 'Haremu' futi.
Saka dai wanga usiri kutarisira fanservice… ikozvino unoziva zvaunotarisira.
Haganai chimedu chehupenyu chakasiyana nechinhu chero chawaona. Nekuda kwenzira yainoita nayo kusurukirwa nekudheerera. Ndichiri kugona kukanda mumedhi uye kudanana pasina kuzvinyadzisa.
37. Kana Zviri ZveMwanasikana Wangu, Ndingatokunde Dhimoni Ishe!
Kana Zviri Zvemwanasikana Wangu ndeye anime akateedzana akaburitswa mu2019 naMaho Firimu (new studio).
Iyo anime yakavakirwa yakakomberedza hukama hwababa-mwanasikana pakati pemunhu nemwana wedhimoni.
Chikamu chega chega chinoratidzika kunge chinofadza kupfuura chinotevera, uye nyaya yacho yakavakirwa pakukwezva kwepamoyo uye 'dzakanaka' nguva dzinoita kuti zvive zvakaoma kusada.
Pasi pechiso - iri zvine musoro nhepfenyuro iyo ichapa chimwe chinhu chitsva kune vateveri veUsagi Drop naBarakamon.
Unyanzvi Teaser Takagi.
Hauna Kunzwa Here? Ndiri Sakamoto!
Hupenyu Hwezuva Nezuva VeVakuru veChikoro Vakomana.
Kwete Asiri Byori Dzokorora.
Ndezvipi zvimwe zvaungawedzera izvo zvakakodzera kutaura?
Ndeupi Anime Ini Wandinofanira Kutarisa? Heano 17 Ekurudziro
15 YeIye Akanakisa Anime Anime Series Unofanirwa Kutanga Kuona
yepamusoro anime akateedzana enguva dzese
10 yakanakisa anime yenguva dzese
yakanakisa slice yehupenyu kudanana manga